सीमा मिचिदैछ, यिनीहरु बोल्दैनन
काठमाडौं । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रका मधेशी सांसदहरु सीमा मिचिएको विषयमा किन बोल्दैनन् ? प्रश्न बढी उठ्न थालेपछि संसदमा राजेन्द्र महतोले भनेका छन्– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मिचियो भने सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकार अपराधी हो । सीमा सुरक्षा दौरासुरुवाल लगाउनेले गर्ने कि धोती लगाउनेले ? सरकार छ भने के हेरेर बसेको छ ? सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकार राष्ट्रघाती हो कि होइन भनेर उल्टोप्रश्न गरेका छन् ।
भारतले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्सामा हाल्यो, यी नेताहरुले केही बोलेनन् । भारतीय रक्षामन्त्रीले मानसरोवर जान राजमार्गको उद्घाटन गर्दा देशै आक्रोसित छ, बिरोधमा उत्रिएको छ, यी नेताहरु पटक्कै बोलिरहेका छैनन् । पहिलोपल्ट सरकारमा बसेर नेकपाले भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध गरेको छ । यद्यपि सरकार बोलीअनुसारको एक्सनमा उत्रिएको छैन ।
मधेशवादी नेता चुप हुनु रहस्यमय छ । मौनम स्वीकृति लक्ष्यणम् भनेझैं भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध नगर्नु कतै भारतीय अतिक्रमणको समर्थन त होइन ? संसदमा तेश्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी हो । यसका नेताहरु महन्थ ठाकुर, डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, विमलेन्द्र निधि(कांग्रेस उपसभापति), राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादवहरु हुन् । यिनीहरु जन्मजात भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध नबोल्ने कसम खाएका नेताजस्ता लाग्छन् । तर मधेशवादी सबै नेताहरु आफूलाई देशभक्त भन्न पछि पर्दैनन् । यी कस्ता देशभक्त हुन्, देश मिचिदा पनि बोल्दैनन् ?
नक्सा छाप्न पनि भारतको अनुमति चाहिने ?